» ठोरीमा कांग्रेसका अवसर र चुनौतीहरु
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार १८:१५ प्रकाशित
– सन्तोष श्रेष्ठ,
आसन्न १४ औं महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसका समर्थक, शुभचिन्तक, कार्यकर्ता तथा नेताहरुबीच केन्द्रदेखि प्रदेश, पालिकादेखि टोल टोलमा चासो अनि चर्चा छ । कांग्रेसलाई हिजो भन्दा अझ राम्रो अनि ससक्त बनाउन प्रत्येक महाधिवेशनले उर्जा दिने छ । महाधिवेशन नेतृत्व हत्याउने सभा मात्र होईन । पार्टीले आगामी दिनमा लिने रणनीति तथा समसामयिक राजननीतिक घटनाको गहिरो विश्लेषण, अध्ययन र पार्टीले खेल्नु पर्ने भूमिकाको गहन छलफल गर्ने थलो पनि हो ।
बिचार/दर्शन/सोच प्रतिपादन गर्ने भनेको नै ब्यक्ति भएको हुनाले ब्यक्तिले पार्टीलाई थप उर्जावान बनाउछु भन्नु स्वाभाविक हो । मैले नवीनतम सोचको प्रवाह गर्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा आउनु स्वाभाविकै हो । एउटा जीवन्त पार्टीमा यो हुन्छ नै, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । मात्र स्थानीय तहमा यो चुनावी प्रकृियाले गुटगत राजनीतिले प्रश्रय पाएर बिभाजनको रेखा कोरिन्छ कि भन्ने मात्र हो । अन्यथा यसले पार्टीलाई उर्जाशील बनाई जीवन्त राख्नेमा दुईमत छैन ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस ठोरीमा पनि पार्टी संगठन भित्र चहलपहल सुरु भएको छ । आगमी दिनमा नेपाली कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्दैछ ? ठोरीमा संगठनको स्वरुप कस्तो बन्दैछ ? ठोरी कांग्रेसको नेतृत्वमा को को आउँदैछन् ? सबैको चासो अनि चर्चाको बिषय बनेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । स्थानीय चुनाव पनि नजिकै आउँदै छ । जनताले नेपाली कांग्रेस ठोरीवाट ठुलो आश गरेका छन् । यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई ठुलो अवसर पनि छ । फेरि चुनौती पनि त्यतिकै छ । ठोरी नेपाली कांग्रेसले चुनौतीहरुको ब्यवस्थापन गर्न सके आगमी दिन ठोरीमा बिजय निश्चित छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा ठोरी नेपाली कांग्रेसलाई जनताहरुले बडो नियालेर हेरिरहेका छन् ।
ठोरीमा स्थानीय तहमा एमाले र माओवादी दलहरुलाई जनताले अभिमत दिएर आफ्नो क्षमता देखाउने मौका दिइसके । एमालेको क्षमता त पहिले नै परीक्षण भइसकेको छ र यो पटक माओवादी ठोरीका जनताको कठघरामा परीक्षण भईरहेको छ । माओवादी सुरुकै बर्षदेखि नै जनतालाई वाक वाक लाग्ने भैसक्यो । माओवादीको विकासको मोडेल “अध्यारोमा झटारो हान्ने” प्रवृतिले ठोरीका जनता आजित भइसकेका छन् । विना योजना, विना तयारीले गरेको कामले समग्र ठोरी लथालिङ्ग भएको छ । मनपरीतन्त्र,भ्रष्ट्राचार,नातावाद,कृपावाद संस्थागत भएको यो अवस्थामा जनताले विकल्पको रुपमा कांग्रेसलाई खोजी रहेका छन् । यस्तो घडीमा कांग्रेसले चाल्ने हरेक कदम विवाद रहित तथा सोच विचारका साथ उठाउन सम्पुर्ण कार्यकर्ताको सुझाव छ ।
आसन्न महाधिवेशनले पार्टीलाई ठोरीमा एउटा उदाहरणीय बनाउने अभियानमा चलाउनु जरुरी छ । १४ औं महाधिवेशन भित्र अवसर पनि लुकेको छ र चुनौती पनि । लुकेर बसेको चुनौतीलाई ब्यवस्थापन गरी त्यो लुकेर बसेको अवसरलाई ठोरी नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गर्न जान्नुपर्यो । झिना मसिना बिषयमा हामी अल्झिनु हुँदैन । सर्वप्रथम पार्टी संस्थागत विकास गरौं, पार्टी क्रियाशील बनाऔं, पार्टीलाई वैचारिक बनाऔं र ठोरीका नेपाली कांग्रेसका क्रियासिल सदस्यहरुद्वारा यो महाधिवेशनलाई परिवर्तनको महाधिवेशन, नयाँ सोचको महाधिवेशन अनि एकताको महाधिवेशन गरेर पर्वको रुपमा मनाई भब्यरुपमा सफल बनाउनु पर्छ । महिला, दलित, जनजाति, मजदुर, बौद्विकवर्ग, युवा, किसान,ब्यापारी, सवै तह तप्कालाई समेटेर पार्टीलाई उर्जावान बनाएर नयाँ सोच अनि नयाँ जोसका साथ पार्टी अब जनताको सामु प्रस्तुत गर्नु पर्ने अपरिहार्य जिम्मेवारी हाम्रो कांधमा आएको छ ।
नेपाली काग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यो पार्टीले आफ्नो पार्टी भित्र अनि अन्तर पार्टीमा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार अनि परिपाटीको विकास गराउने अगुवाई भूमिका निभाउनु पर्छ ।नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो चरणको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको “सहमत सहकार्य अनि एकता” यसैलाई सर्बोपरी मान्दै सबै कार्यकर्ता, सबै विचारलाई उचित स्थान, उचित सम्मान दिएर हामी सर्वसहमति आधारवाट वडा अनि पालिका स्तरीय समिति गठन गरि पार्टी अगाडी बढ्नुपर्छ ।
यस १४ औं महाधिवेशनमा कसैको जित अनि कसैको हार हुनुहुँदैन । यो खेलमा सम्पुर्ण नेपाली कांग्रेस ठोरीको नै जित हुने खेल हामीले खेल्नुपर्छ । अन्यथा सर्वसहमत नभएर जित र हारको चक्रब्युहमा हामी फस्यौं भने त्यो कसैको लागि पनि हितकर हुने छैन । त्यसैले ठोरीमा यस्तो हितकारी नहुने, बिभाजनकारी खेलको सुरुवात नै नगरौं भन्ने हो । नेपाली कांग्रेस ठोरीमा अनुभवी, त्यागी नेता कार्यकर्ताहरुको कमी छैन । उहाँहरुको अनुभव र उर्जाले यो १४ औं महाधिवेशनलाई विवाद रहित तथा सहमतिको माध्यमवाट निकास दिने छ भन्नेमा सम्पुर्ण समर्थक/शुभचिन्तकहरु ढुक्क रहेका छन् । हामीसँग रहेको केही असहमतिलाई सहमतिमा परिणत गरेर पार्टीको हितको लागि सबैले त्याग गर्नुपर्छ । त्यसैले ठोरी गापा-२ का वडाध्यक्ष आदरणीय दाई किशोर तामाङ ज्युले सहमतिको लागि पहिलो प्रयास गरेर सहमतिको अभियानमा सुरु गरेको हुँदा वहॉलाई पनि बिशेष बिशेष धन्यवाद दिँदै यो अभियानलाई सहि टुङ्गोमा पुर्‍याउनु हुन्छ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु ।
त्यही अभियानलाई निरन्तरता दिई नेपाली कांग्रेस ठोरी गाउँ कमिटीले दोस्रो बैठक राखी सहमतिको अर्को प्रयास भयो । जस अनुसार १४ औं महाधिवेशलाई सहमति गराउन किशोर तमाङको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएर सकरात्मक कार्य सुरु भएको छ । अब कार्यदलले संगठन निर्माण र प्रतिनिधि छनौटमा ठोरीमा सर्वसहमति गराउन सक्नेछ भनी सम्पुर्ण कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरु विश्वस्त छन् । यस कार्यलाई सफल बनाउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै शुभकामना पनि ब्यक्त गर्दछु ।